ကျွန်တော့် စိတ်ကူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ကျွန်တော့် စိတ်ကူး
- ချစ်ရင်ထူး II
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on May 7, 2012 in Myanmar Gazette, Photography | 49 comments
ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ . .
ကျွန်တော် ရွာထဲကို ပိုစ့် မတင်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ . . . အလုပ်ကလည်း များနေတော့ စာဖတ်ရုံလောက်ပဲ ဖတ်ဖြစ်တာ များပါတယ် . . 1.5.2012 တုန်းက ကျွန်တော် တစ်ကယ်ပဲ ပျော်ခဲ့ရပါတယ် . . ကင်မရာ တစ်လုံးဝယ်ခဲ့ပြီးတော့ ဟိုရိုက်သည်ရိုက် ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် . . ပုံတွေကိုတော့ မတင်ပေးတော့ပါဘူး . . ။
စကားကြောရှည်နေပြီ . . .
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ရွာထဲမှာ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ လုပ်ရင်ကောင်းမလား လို့ပါ . . ကျွန်တော်က တိုင်ပင်ကြည့်တာပါ . . ပြိုင်ပွဲ အတွက် လိုအပ်မယ့် အချက်အလက်တွေ အစီင်္အစဉ်တွေကို ကျွန်တော်နဲ့ တိုင်ပင်ချင်ပါတယ် chityinhtoo374@gmail.com ။ ဆုရ ဓါတ်ပုံ ရွေးချယ်ရေးအတွက်ကိုလည်း ရွာရဲ့ သူကြီး ကို အကြံဥာဏ်တောင်းချင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ဒါက ကျွန်တော့ စိတ်ကူးပါ .. ဝေဖန် အကြံပြု ချက်တွေကိုလည်း လိုချင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်က ကင်မရာ ဘက်မှာဆိုရင် ဝလုံးကိုတောင် ဝိုင်းအောင် မရေးနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေ မို့ပါ .. တစ်လခြင်း ပြုလုပ်မယ်လို့ တွေးထားပါတယ် ။
ထင်မြင်ချက်လေးပေးကြပါဦးနော် . . .
ချစ်ရင်ထူး . . .
About ချစ်ရင်ထူး II
View all posts by ချစ်ရင်ထူး II →
ပြီးတော့ အနော်တို့က ဓာတ်ပုံပညာရဲ့စည်းမျည်း စည်းကမ်းတွေကို သိဘူးဟဲ့
ရွာထဲက လတ်တလော ပူပူနွေးနွေးဆုရထားတဲ့ ကိုလုလင်ကို မေးကြည့်ကွဲ့
ကိုယ့်ဆြာတို့ပဲ ပြိုင်ကြပါဗျို့ ..
အလုပ်ကိစ္စ နည်းနည်း တိုင်ပါတ်နေလို့ပါ…
ပြိုင်ဖြစ်ရင် တော့ အားပေးနေပါမယ်ဗျို့ …
ဇဂါးမစပ် ..သဂျီး ကိုပါ ၀င်ပြိုင်ခိုင်းဗျ… D5100
ဒက်ဂလောက် ..ဒက်ဂလောက် ..
ကို ရဲတိုက် ကိုတော့ ပြိုင်ခိုင်းဘူး. . .( တော်ကြာ ဆုကြေးကို သူပဲ သဲ့ယူသွားမှာပေါ့ လို့)
အဲလို ဆရာဂျီးတွေကို ရွေးချယ်ရေး ထဲ ထည့်ထားဖို့ စိတ်ကူးမိတယ် ဟိ..ဟိ..
သူကြီးရေ သူကြီးလက်ရာလေး မြင်ပါရစေ. . .( လက္ခဏာ ဗေဒင် )
အော် ရယ်. . . ခက်ပီ .
ဖရဲမ ရဲ့ နာက ဝလုံးတောင် မဝိုင်းသေးပါဘူး ဆိုမှ အပြင်မှာ သွားပြိုင်ရင် အမှိုက်တောင်းထဲရောင် ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး . .
အတွေ့အကြုံ လိုချင်လို့ပါ . .
ဥပမာ ဗျာ ကျွန်တော်က တစ်ပုံရိုက်လိုက်တယ် ဆိုရင် ဆရာ့ ဆရာများက
ချစ်ရင်ထူး မင်းရိုက်တာ က ဘယ်လိုပြောင်းရိုက်လိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမယ် အဲဒါမျိုးလေးတွေ သင်ပြပေးစေချင်တာပါ
သင်တန်းအတွက် အချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးလေ. . . ဓါတ်ပုံက အပျော်တမ်းပဲ ရိုက်မှာပါ . . မေဂျာ မဟုတ်ပါဘူး . . .
ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်စေချင်တယ်.. နောက်များရောပေါ့
အားလုံးလည်း ကြည့်ရှု အားပေးလို့ရ ဆြာတွေလည်း ဝေဖန်ပေးလို့ ရတာပေါ့..။
ကျနော်တို့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တင်နေတာက ကင်မရာအစုတ်ကလေးနဲ့ မြင်ကရာ ခလုတ်နှိပ် လာတဲ့ ပုံတွေများပါတယ်
ပြိုင်ပွဲ ဆိုပြီးလုပ်မယ်ဆို သေချာအချိန်ပေး၊ ကင်မရာလည်း ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ရိုက်နိုင်မှ
ပွဲလုပ်ပြီး ကချောက်ကချက်ပုံတွေ ပြရရင် ရှက်စရာကြီး ဟီး.. သများပြောမှာစိုးလို့ပါ
ပုံလေးတွေ တင်ပါဗျာ အားပေးနေပါ့မယ်
အောက်ကနေ ဝေဖန်အကြံပေးဖို့ အသင့်
MPS အသင်းဝင်ထားမယ် ဆိုရင် လပတ် ပြိုင်ပွဲတွေ … ၀င်ပြိုင်လို့ ရတယ်ဗျ …. Canon Club Member ၀င်ထားမယ် ဆိုရင်လဲ Club က ခေါ်တဲ့ ပွဲတွေ ၀င်ပြိုင်လို့ ရနိုင်မယ်။ Canon Club Member ဖြစ်ဖို့ကတော့ Canon DSLR တစ်လုံး ၀ယ်လိုက်တာနဲ့ …Form ဖြည့်ပြီး Member ဖြစ်လို့ရပါပြီ။ Lens, body နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စာအုပ် ငှားလို့ ရပါတယ်။
Canon DSLR က ဈေးဘယ်လေယက် ရှိလဲ ခင်ဗျ။
5 သိန်းဝန်းကျင် ကနေ ၃၀ ၀န်းကျင် လောက် ရှိပါတယ်။ body နဲ့ kit Lens နဲ့ပါ။ professional one set ၀ယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၇၀ နီးပါး လောက် ကျသင့် ပါတယ်။
ပြိုင်ကြအေ …….. နာ့ပုံမပါဖို့အရေးကြီးတယ် ………. အပိန်ဆုံးလူပြိုင်ပွဲဝင်ချင်ရင်တော့ နာ့သာလိုက်ရိုက် …
အောင်မယ်လေးဆရာကြီးတွေကိုဝင်ပြိုင်ခိုင်းလို့လဲမဖြစ်။ သူတို့ကိုအမှတ်ပေးခိုင်းပြန်လဲကိုယ်တွေပုံက မူကြိုအဆင့်တောင်မ၀င်။ တော်ပါပြီ ပြိုင်တေ့ာဝူးရယ်။ ပြိုင်တဲ့သူတွေကိုပဲကြည့်တော့မယ်။ ပုံတွေပြောပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဆိုတာထက် ..ပြပွဲ ဆိုတာမျိုးလုပ်ရင် ပိုကောင်းမယ်ဗျ…
ဦးဆောင်သူ ၁ဦးလိုလိမ့်မယ်… ၁လတခါဖြစ်ဖြစ် ရွာတွင်း ဒါ့ပုံပြပွဲလေး လုပ်သွားသင့်တယ်ဗျ ..
၁။ schedule ရေးထားပြီး ခေါင်းစဉ် သတ်မှတ်ဗျာ …
ရွာသူားတွေက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ပျံ့နှံ့နေကြတာဆိုတော့ ..(သဂျီးလေနဲ့ပြောရရင်)
သတ်မှတ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်က လူတကာ ရိုက်လို့ရတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရမယ်ဗျာ …ဘောင်ကျဉ်းလို့မရဘူး
ဥပမာ ရွှေတိဂုံဘုရားလို့ သတ်မှတ်လိုက်ရင် ရန်ကုန်တ၀ိုက်က ဆြာတွေပဲ ၀င်ရိုက်လို့ ရမလို ဖြစ်နေလို့ရယ်..
၂။ သတ်မှတ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကိုလည်း photography ရဲ့ genre တွေ အစုံအလင် ဖြစ်အောင်
တလှည့်စီ သွားသင့်တယ် ထင်တယ်ဗျ..ဒါမှပဲ D-SLR တွေသာမက compact တွေပါ ပါဝင်နိုင်မှာဗျ…
nature, landscape, street, HDR, macro, long-exposure, floral, candid, pictorial မျိုးစုံပေါ့ဗျာ..
၃။ လူတယောက်တည်းဆီ ပို့ပေးပြီး အဆိုပါ တယောက်က ပုံတွေအားလုံး စုပြီး တင်ပေးတဲ့ တာဝန်ကိုယူပေါ့..
သဂျီး ကို အကူညီတောင်းလို့ ရရင်တော့ ကောင်းလေစွဗျာ .. ဒါမှမဟုတ်လည်း ကော်နက်ရှင် ကောင်းတဲ့ ၁လတခါ တင်ပေးနိုင်တဲ့ လ
ူတယောက်ယောက် ပေါ့ ။ စတုထ္ထပါတ် တိုင်း ပြပွဲလုပ်မယ်ဆို လတိုင်းရဲ့ ၂၀ရက်နေ့ဟာ နောက်ဆုံး လက်ခံရက်ပေါ့ဗျာ..။
ပုံစု တင်တဲ့ အလုပ်ကိုတော့ .ဟိုလူဂျီး မလုပ်ပေးနိုင်ရင် ကျနော် လုပ်ပေးပါ့မယ်..(ကျနော်တော့ ၀င်မပါဘူးနော)
ဒါကတော့ သဂျီးကို အကူညီတောင်းကြည့်ဗျို့ ..
ဆိုပါစို့ လစဉ် ၁လတခါ စတုထ္ထ ပါတ်တိုင်း ရွာတွင်း ဒါ့ပုံပြပွဲ လုပ်တယ်ဆိုပါစို့ … အနှီ ၁ပါတ်စာကိုတော့ဖြင့်
စတစ်ကီလေးချီးမြှင့်စေ ဖို့ပေါ့ဗျာ …
ပါဝင်သူ ဒါ့ပုံဆြာများနဲ့ တကွ ပိတ်သတ်ကြီးက ရိုက်ထားတဲ့ မှတ်တမ်း setting cropping နဲ့တကွ အခြားသော မှတ်ချက်လေးတွေ
know-how လေးတွေ ချီးမြှင့်ကြမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဒါ့ပုံပညာ တိုးတက်ပြန့်ပွားရေးလည်း ဖြစ်ပြန် သည်တခါပြပွဲတော့ ဘယ်သူ
အကောင်းဆုံး ဆိုတာလည်း သိရပြန်.. အဆင်တစိုက် လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ရွာ့ ဒါ့ပုံမှတ်တမ်း ပိုစ့်များ အဖြစ်လည်း ကျန်ရစ်ပြန်
၀င်း-၀င်း-၀င်း ပေါ့ဗျာ.. သဂျီးမင်းက ယခုလအတွက် ရွာသူားတွေထဲက အကောင်းဆုံးသော ဒါ့ပုံ ကို သတင်းစာမှာ နေရာပေးမယ် ဆိုရင်တော့
ဆြာလေး ချစ်ရင်ထူး-၂ရေ ..ဦးဆောင်လိုက်တော့ ဗျို့…
ကဲ ကဲ ..လိမ့်ဘီဗျို့ …
မာကတ္တာ ဆိုတာ ကြပ်ပေးတဲ့ အလုပ်ပဲ လုပ်တာ မို့..
အင့် အင့် ..ဒါမိုးလေးဒွေ …လုပ်ကြည့်ပေါ့….
အားလုံးကို ဖတ်စေချင်လို့ပါ. . . ကျွန်တော် ပြန်ရောက်ပါပြီ . .
စကတ်ဂျူးလ်နဲ့ ခေါင်းစဉ် ကိုယ့်ဆြာသမား စဉ်းစားပေတော့ဗျို့…
ပြီး ရင် အကြောင်းကြားလိုက်..
mgazettephotoshow@gmail.com ကတော့ ဖွင့်ထားပြီးပြီ …
(ကိုဗိုက်ကလေးတောင် သူ့ လိုင်စင်ပုံ စမ်းပို့ကြည့်ပြီးသွားပြီ)
စည်းမျဉ်းနဲ့ လုပ်မယ့်ပုံလည်း အကြမ်းဖျင်း ထွက်နေပြီမို့ ..
အချော သတ်ပြီးသာ ဆက်ဆွဲလိုက်ပေတော့ ကိုယ့်ဆြာ …
သူကြီးပြိုင်ပွဲလုပ်ပေးရင်တော့ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် တို့လိုဘာမှမတက်သေးသူ တွေဘဲပြိုင်ပွဲဝင်ခိုင်းရင်တော့ ပြိုင်ပွဲကမျှတယ် ရွာထဲမှာက အပြင်ဓာတ်ပုံဆရာ တွေတောင်ထိုင်ငိုလောက်အောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေရှိတယ် နော် စည်းကမ်းတွေသေချာသတ်မှတ် မှရမယ် တို့တော့ပြိုင်ပွဲလည်းဝင်မပြိုင်ရဲ ဘူး ကင်မရာလည်းမရှိဘူး
ဒို့ ကတော့ ဝေဖန်ရေးနဲ့လေကန်ရေးလုပ်ပေးမယ်ဟေ့
ပြိုင်ပွဲပဲ ဖြစ်မလား ပြပွဲပဲ ခေါ်မလားမသိပေမဲ့..
ရွာသူားအများနဲ့ သက်ဆိုင်တာမို့ ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတခုတော့ ဖြစ်နိုင်ကောင်းတယ်လို့ ထင်ရင်း..
ကိုယ့်ဆြာတွေ ဂယ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်တွေလည်းပညာရနိုင်ကောင်းရဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ၀င်ကြပ်ပါတယ်ဗျ..
ဓါတ်ပုံလည်း.. တချို့ပွဲတွေ… ၀င်ပါပြီးရိုက်မယ်စိတ်ကူးတယ်..
ကျုပ်ရိုက်တဲ့ပုံ.. မရွေးရင်တော့.. မရွေးတဲ့သူကို ဖြတ်မယ်..
Moe Min (Rays)နဲ့တော့.. အယ်လ်အေမှာ ဓါတ်ပုံပွဲလေးလုပ်ပေးဖူးတယ်..
လိုတာကတော့ သဂျီး ဆာဗာ ပေါ်က စပေ့စ် ပဲဗျ …
ကျနော် gmail account အသစ် တခု ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျာ..
အဲ့ကို ပို့ပေးကြပါ …ဖွင့်ပြီးရင် ချစ်ရင်ထူး၂နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး
ပြန်ကြေငြာပါ့မယ်..ပုံတွေ ဒိုင်ခံတင်ပေးမယ်… ဆိုက်ဇ် ကတော့
မီဒီယံ ဆိုပါတော့ …
caption မှာ ရိုက်တဲ့ ရွာသူား ရဲ့နာမည်ရယ်
ပုံရဲ့ အောက်က အညွှန်းစာအနေနဲ့ကတော့ ရိုက်ထားတဲ့ setting
(camera, lens, exposure, aperture, iso ပါရင် ပါသလို ထည့်ပေးမယ်ဗျာ..)
၁လမှ ၁ကြိမ် လုပ်မယ့် ပွဲမို့ sticky ကို ၁ပါတ်တော့ တောင်းဆိုပါရစေဗျာ…
အသေးစိတ်ကိုတော့ ချစ်ရင်ထူး-၂ နဲ့ ပြောကြည့်ပါဦးမယ်ဗျ…
ပုံတွေ.ပြိုင်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ.။ ဂေဇက် ပေါ်..ပုံတင်ရတာ.တော့ေ တ်ာတော်ကို ခက်နေတယ်နော် ။
ကိုအလင်းဆက်ရေ ..ကျနော် ဖြေထားတယ်လေဗျာ …
ကျနော် မေးလ် အကောင့် တခု ဖွင့်မယ်
ဥပမာ (MGazettePhotoShow@gmail.com) ပေါ့ဗျာ
ဥပမာ ပြောတာနော ဂယ် ဖွင့်ရသေးဝူး..
အဲ ဖွင့်ပြီးရင် ကြေငြာမယ်ဗျာ …
အဲ့သည့်ကို ဒါ့ပုံတွေ ပို့ပေး ကျနော် ပို့သူနာမည်နဲ့ ပုံရဲ့
setting တွေကို ရေးပြီး ဒိုင်ခံ တင်ပေးမယ်ဗျာ..
သဂျီးက ၁ပါတ် လောက် စတစ်ကီ ချီးမြှင့်မယ်တဲ့ …
လောလောဆယ်တော့ မူရင်း အိုင်ဒီယာ ပိုင်ရှင်
ခရထ-၂ ကဘယ်သွားအိပ်ပျော် နေမှန်း မသိတဲ့အတွက်..
ဘာမှ မပြောရ မပြင်ရသေးပါကြောင်း..
အနော်လဲ ၀င်ပြိုင်မယ်နော် ….
တို့တတွေ အကဲဖြတ်ဒိုင်သူကြီးများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အဆိုတင်သွင်းပါ
Computational photography (artistic)
ပြိုင်ပွဲဆိုတာထက် ပြပွဲဆိုတာလေးက ပိုအဆင်ပြေလောက်တယ် … လက်ရာပေါင်းစုံ ၊ လူပေါင်းစုံ ၀င်နှိုင်တယ်…
ပြိုင်ပွဲဆိုရင် ဆရာတွေ လက်တွန့်လိမ့်မယ် … ။
ပြပွဲဆိုရင် မတတ်သေးတဲ့သူတွေက တတ်ပြီးသားသူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေအပေါ်မှာ စံနမူနာ ယူနှိုင်တယ်..
ဘာကြောင့် မကောင်းတယ် ၊ ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်ဆိုတာလဲ သိသွားလိမ့်မယ် …
ဒိုင်အနေနဲ့ သီးခြားမလုပ်ပဲ (ဒိုင် ဆရာတွေပါ ၀င်နှိုင်အောင်ပါ)
ရွာသူရွာသားတွေ အောက်ကနေ ကွန်မန်းနဲ့ ကိုယ်ထင်ရာ အကောင်းဆုံး တစ်ပုံကို ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရွေးချယ်ပေးသွားရင် အဆင်ပြေမယ် .. ။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပေါ့ …။
လက်ရည်တူခြင်း ထိုးနေလို့ကတော့ လက်ကတော့ တက်မှာ မဟုတ်ဘူး … ။
ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့သူတွေ ပါကာမှ လက်တက်လာမယ်လို့ ထင်တယ်လေ…။
ပြိုင်ပွဲဆိုလဲ ကြည့်မှာဘဲ ၊ ပြပွဲဆိုလဲ ကြည့်မှာဘဲ
ဖြူဖြူမဲမဲသဲသဲဝဲဝဲ ဘာလာလာ ကျုပ်တို့ က ပရိသတ်ဘဲ
ပြိုင်ပွဲဆိုတာထက် ပြပွဲဆိုရင် ပိုမှန်မယ် ရွာထဲက လက်ရာတွေအကုန်လုံးကို ဖော်ပြတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။ ဆွာကြီးတွေများတော့ ကင်မရာကို ခလုတ်ပဲနှိပ်တတ်တဲ့ မနောဖြူတို့က ပြိုင်ပွဲဆိုရင်တော့ နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ၀င်မပြိုင်တော့ပါဘူး။ ဂီဂီတို့ကတော့ ပညာစွမ်းတွေပြနေပါပြီ။ ဓာတ်ပုံပညာဆိုတာလည်း လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ ရိုက်တဲ့သူက မှောက်ပြီး ရိုက်တာတို့ ကုလားထိုင်ပေါ်တက်ထိုင်ပြီး ရိုက်တာတို့လည်း တတ်ထားဦးမှလေ…
ဒါဟာ မကြာသေးခင်က ကျနော် တို့ မက်ဖူးတဲ့ hundred young burmans အိပ်မက်အတွက်
ပထမခြေလှမ်း များ ဖြစ်မလား မဆိုနိုင်ဘူးဗျာ..
ဖြစ်မြောက်အောင်တော့ တတ်စွမ်းသမျှ အားထည့် ပါ့မယ်ဗျာ..
အဲ့သည့် စာအုပ်ကလေး လက်ထဲ ရောက်ပြီဆိုရင်လည်း အနှစ်လေးတွေ ရှဲပါဦး…
လက်ထဲ.. ဓါတ်ပုံစာအုပ်နဲ့.. အဲဒါရောက်လာတာ.. အနှစ်တင်မဟုတ်..အကာတောင်မကြည့်ရသေးဘူး..
ကျုပ်က.. အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခံရတဲ့ဓါတ်ပုံ.. သတင်းစာထွက်ချိန်နဲ့ကိုက်ရင်. ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပေးပါမယ်..။
ဆာဗာကို.. ဒီတခေါက်တိုးရင်.. ဘက်ဂျက်တော်တော်ထိလိမ့်မယ်ထင်တယ်..။
ဆိုတဲ့ အကောင့် တခု ဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်..
သဂျီးကိုလည်း ပါ့စ်ဝါ့ဒ် ရှဲပါ့မယ်
ကျနော်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ်
ကော်ကောင်းတဲ့ မော့ဒ် တယောက်ယောက်ရှိလာတဲ့အခါ
schedule ကိစ္စ အိုခေ သွားရင် စလို့ ရပါပြီ
ဒါ့ပုံတွေ အဲ့သည့်ကို ပို့ပေးနိုင်ကြပါတယ်…
(ဘာဆက်လုပ်မလဲ ဆိုတော့ …ခုတော့ မူရင်း အိုင်ဒီယာပိုင်ရှင် ခရထ-၂ ကို စောင့်နေပါတယ်)
ပုံ size ကတော့ သဂျီး ဆိုက်မှာ ချုံ့တဲ့ ပလပ်ဂင် ထည့် ထားပြီးပြီမဟုတ်လားဗျာ..
ကျနော်တင်ရင်လည်း မီဒီယံ ဆိုဒ် နဲ့ ပဲ တင်ပေးပါ့မယ်
လွန်ရောကျွံရော800×600 100dpi နဲ့ ဆိုတော့ ပုံကို 500k ကျော်မယ် မထင်ပါဘူး
ကိုလုလင်မေးတဲ့ ကိစ္စကတော့ ကိုယ်တိုင် ရေစာထိုးတဲ့နည်းနဲ့ပဲ ကာကွယ်နိုင်မယ် ထင်ရဲ့ဗျာ..
ဒါပေသိ ..ဘယ်သူ့လက်ရာမှန်းမသိဘဲ စာဖတ်သူ ဗုတ်နိုင်အောင်က အဲ့လို မကောင်းဘူးဗျ..
သဂျီးရဲ့ အော်တို ရေစာ ထိုးတဲ့ ဟာကို မန်းဂေဇက် လိုဂို ပြောင်းပြီး နည်းနည်းကြီးလိုက်ရင် အဆင်ပြေရဲ့ဗျာ…
(ကူးလည်း ဘယ်က ကူးလာလဲ လက်ပူးလက်ကျပ် မိတာပေါ့ …မိရင် သွားစွာကြတာပေါ့…)
လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ အခြားက သူငယ်ချင်း ဒါ့ပုံသမားတွေ နဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေ ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ကြပါဦးစို့
P.S မတူသောအတွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံ ရိုက်တင်ပါ…
အခုတင်. .. အမြန်လှန်ဖတ်လိုက်တာ…100 Young Americans မှာအဓိကက.. အဲဒီလူငယ်တွေရဲ့.. ပွင့်လင်းတဲ့အပြောသဘောထားတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတယ် ထင်မိတယ်..
ပုံတွေက..အထူးပြင်ဆင်ရိုက်ထားတာဆိုတာထက်.. ပုံမှန်နေ့စဉ်ဘ၀ထဲကပုံတွေကို အမိဖမ်းထားတာလို့ထင်မိတယ်..။
ဆိုတော့.. ဒီလိုစာအုပ်မျိုး.. စာရေးဆရာ..နိုင်ငံရေးသမား..သမိုင်းဆရာ စသဖြင့်..အကုန်ဝယ်သိမ်းရမှာပဲ..
ဒီထဲမတော့ အမြည်း ၀င်ကြည့် ထားတယ် သဂျီးရေ…
တခြား ဆိုက်တွေထဲမှာလည်း ၃-၄ခုလောက် ကြည့်ရ ဖတ်ရရဲ့..
photo essay ပုံစံကွဲ ၁မျိုးလို့ မြင်မိရဲ့ဗျာ…။
အထူးပြင်ဆင် ရိုက်ကူး ဆိုတာထက် .. location, subject
ကိုလိုက်ပြီး သုံးသွားတဲ့ setting တွေ techniques တွေကနေ
ရေရေလည်လည် ပညာရစရာ ရှိတာမို့ …၀ယ်ဦးမယ်ဗျာ..
တနေ့တော့ ဒါမျိုး အမှန်တကယ် ရိုက်ချင်ပါရဲ့…
ပုံတွေ ရဲ့ လုံခြုံ ရေး ကေစ့် ကော .. ဘယ်လို စဉ်းစားကြမလဲ ဗျ .
အဲဒီပြပွဲမှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူက သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်တာ ၀င်ပြကြမယ်
ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် ရိုက်တဲ့ပုံဖြစ်ရမှာကတော့ အသေအချာပဲ
လတ်တစ်လော ရိုက်တဲ့ပုံလား ၊ ဟိုး အရင်ကတဲက ရိုက်ထားတဲ့ပုံက
ခေါင်းစဉ်နဲ့ အကြုံးဝင်နေရင်ရော ၀င်ပြလို့ရလား
ပို့စ်ထဲမှာ သုံးဘူးထားတဲ့ ပုံ ဆိုရင်ရော
တကယ် လုပ်တဲ့ အခါ ဖြစ်လာနိုင်တာလေး ကြိုစဉ်းစားကြည့်တာပါနော
အားပေးနေပါမယ်ဗျာ။ လုပ်ပေးနိုင်သူတွေ လုပ်ပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေဆိုလို့ကတော့ ………. ကြည့်မယ်.. အားပေးမယ်။
ကိုယ်တိုင်တော့ မပြိုင်တာကြာပြီ။ ပြိုင်မယ်သူတွေကိုတော့ လှိုက်လှိုက်လဲလဲ အားပေးလျှက်ပါ။
ဒါမှ ရွာလက်ရာကောင်းလက်ရာမွန်တွေ တစ်ဝကြီးတွေ့တွေ့နေရမှာ။
ဲပြိုင်ပွဲ မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ ပြပွဲပါ
ဆရာ့လက်ရာလေးတွေလဲ ပညာယူပါရစေ ..
ဆြာသော့နဲ့ ဆြာမှော်ပါ ဖတ်ရှုအားပေးနေတဲ့အတွက် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်ဗျို့ ….
ဆြာ၂ယောက်ရဲ့ အိုင်ဒီယာနဲ့ လက်ရာ (ယာနဲ့ ရာ) ကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်ဗျ..
တခုလေးဗျာ ..မနေ့ညနေကတောင် ရွာဇရပ်ထဲ ပြောဖြစ်သေးတယ်..
ဘယ်သူဘယ်ပုံဆိုတာ မသိဘဲ တင်နိုင်ရင် ပိတ်သတ်တွေ ကြည့်ရ မန့်ရတာ ပို
အဆင်ပြေမယ် မဟုတ်လားဗျ … စုပြီးတင်ပေးသူ ကျနော်ကတော့ ဘယ်သူ့လက်ရာ
ဘာဆိုတာတော့ သိနေမှာပေါ့ဗျာ ..တင်တဲ့အခါ ကျနော်က ပုံနံပါတ်ဘယ်လောက်
ဘယ်သူ ဆိုတာ list လုပ်ပြီး သဂျီးဆီ ပို့ပေးထားမယ်.. နောက်ဆုံး စာရင်း ချုပ်တဲ့အခါ
ကျမှ သဂျီးက ဘယ်သူဘယ်ပုံ ဆိုတာ ကြေငြာပေး..အဲ့လိုမျိုးလေး သွားမလားလို့ဗျာ..
တယောက်ချင်းစီရဲ့ ရေစာတော့ ထိုးလို့ မရတော့ဘူးပေါ့.. အကူးမခံရအောင်တော့
Gazette လိုဂို အော်တို ရေစာ ထိုးဖို့တော့ သဂျီး ကို အပူကပ်ရမယ်ဗျို့….
ဦးနိုမေးထားသလို ဘယ်တုန်းက ရိုက်ထားရိုက်ထား ..ခေါင်းစဉ်နဲ့ အံဝင်ရင်
တင်လို့ ရပါကြောင်းလေး … တခါတည်း ဖြေပါရစေခည…
အကြံကို အထူးသဘောကျကြောင်း နဲ့
အဲဒါလေးလဲ မဆိုးဘူးပဲ ….
မျှတသွားတာပေါ့ ….. အောက်က ကွန်မန်းပေးတဲ့သူတွေကလဲ အကြိုက်ဆုံးတစ်ပုံကိုရွေးပြီး ဘာကြောင့်ကြိုက်သလဲ ဆိုတာလေးပါ ရေးပေးနှိုင်ရင် Poll သဘောမျိုးဖြစ်သွားမယ် ..။
ခေါင်းစဉ်ကို သုံးလစာ ကြိုထုတ်စေချင်တယ်…
တစ်ယောက်ကို ဘယ်နှစ်ပုံလက်ခံမလဲ ဆိုတာလဲ စဉ်းစားထားပါ..။
နောက်တစ်ခု ဒီမှာ တင်ပြီးရင်ကော အဲဒီပုံကို တခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်ခွင့်ရှိမရှိ သိချင်တယ်..။
ခေါင်းစဉ်ကလဲ ပရိုသမားတွေသာ မက လက်သင်တွေပါ လွယ်လွယ်ရိုက်နှိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ် ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်…။နို့မို့ဆို ပရိုသမားတွေအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သွားမယ် …။
စကားမစပ် စိုင်ပုံပြိုင်ပွဲလေးများ မလုပ်ချင်ဘူးလား …။ဒီပြပွဲကို အကြောင်းပြပြီး စိုင်ပစ်ထွက်ရင် ကောင်းမလားလို့ …
ပိုစ့် ပိုင်ရှင်မရှိတုန်း ၀င် အာချောင်မိပါတယ်…
ကူအုံးစားပေးမလား မှတ်တယ် …သူကချည်း မေးနေတော့တာပဲ
၁ပုံစီပဲ လက်ခံမယ် စိတ်ကူးတယ်ဗျ ..(ပထမဆုံးအနေနဲ့ လည်းဖြစ် ဘယ်နှယောက် ပါမလဲ ဆိုတာလည်း မသိသေးတော့)
၀င်ပြတဲ့လူ သိပ်နည်းနေရင်တော့ ပို့ထားတဲ့ သူတွေကို စာပို့ပြီးနောက် ၁ပုံစီ ထပ်တောင်းမယ်ပေါ့…
ခေါင်းစဉ်က ဘယ်သူမဆို ရိုက်နိုင်အောင် အတွက် စဉ်းစားကြည့်နေပါတယ်…
(၃လစာ ဆိုတော့ ညည်းလည်း တခု ၀င်စဉ်းစားအေ…)
တခြားပြိုင်ပွဲ ၀င်ခွင့်ရှိမရှိက အနှီပြိုင်ပွဲရဲ့ စည်းကမ်း ကန့်သတ်ချက် နဲ့သာ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျ
(သိတယ်မလား မည်သည့် အွန်လိုင်း မီဒီယာ ဘာညာ သာဒကာမှာ တင်ဖူးခြင်း မရှိရ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့)
သည်ဘက်အနေနဲ့ကတော့ ဒါဟာ ပြိုင်ပွဲမဟုတ် ပြပွဲသက်သက်ဆိုတော့ ..သည်မှာ ပြဖူးတဲ့ပုံ
ပြိုင်ပွဲသွား ဆုရ ဖြစ်တယ်ဆို ဒီဘက်ကတောင် ဂုဏ်ယူကြရဦးမှာ မို့ ကန့်သတ်ချက်
စိုင်ပစ်ဖို့ အကြောင်းရှာနေတာတော့ သများလည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါကြောင်း..
(ကိုယ့်ဆြာတို့လို အိမ်ကွင်း မပြောနဲ့ အဝေးကွင်း ကြားကွင်း ငှားကွင်း ဘာကွင်းမှ မရှိသူရယ်ပါ…)
ဘယ်သူပုံဆိုတာ မဖော်ပြဘဲ တင်တာမျိုး လုပ်ဘူးပါတယ်။
ကိုသော့ လုလင် ရွှေမင်းသား နဲ့ ကိုပေါက် လေးယောက်ပေါင်း ပြီး တစ်ခါတင်ဘူးပါတယ်။.
လှတယ်မလှဘူး ဆိုတာကို စိတ်ဘက်လိုက်မူ့မပါဘဲ မှတ်ချက်တွေအမှန်အတိုင်းရတာပေါ့.
အခုလဲ ပဒုမ္မာနဲ့ကိုပေါက် တင်နေပါတယ် ကောက်သင်းကောက်
နောက်ရက် လုလင်နဲ့ ကိုပေါက် ထပ်လာမယ်
ဘယ်သူရိုကတယ်ဆိုတာကို ပြောမထားဘဲ တင်တာပါ။